Himannaan Obbo Baqqalaa Garbaa adda cite jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Himannaan Obbo Baqqalaa Garbaa adda cite jedhame
Goodayyaa suuraa Obbo Baqqalaa Garbaa yaalii fayyaa fooyya'aa dhoorkaman
Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himannaan namoota torbaa adda cite jedhame.
Koreen hojii raawwachiftuu ADWUI haaluma namoota jeequmsa, shororkeessummaa fi makaraarsummaa amantiitiin himatamaniifi murteen irratti dabarfame, himannaan isaanii adda cituun dhiifamaan akka gadhiifaman himamee ture.
Haaluma sanaanis hidhamtoonni gadhiifamuu eegaluun isaanii ni yaadatama. Hoggantoonni paartilee mormitootaafi hidhamtoonni hafan akka gadhiifamaniif hanga ammaatti gaafatamaa jiraachuun ni beekama.
Har'a dhaabbanni midiyaa Faanaa Biroodkaastiingi Koorporeet abbaa alangaa federaalaa eeruun akka gabaaseetti ammoo, haaluma waadaa galameen himannaan Obbo Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanaa, Addisuu Bullaallaa, Dajanee Xaafaa, Geetuu Gaarumaa, Tasfayee Liibaniifi Bayyanaa Rudaa akka dhaabbatu taasifameera.
Haa ta'u malee sababii dadhacha jeeqaniiru jedhuun irra deebiin manni murtii adabbii hidhaa waggaa tokkoofi kan ji'a jahaa itti murteessuun isaa ni yaadatama.
Haaluma kanaanis dhimmi isaanii akka boordii dhiifamaa federaalaatiin ilaalamuufi pireezidantii biyyattiitti dhiyaachuun yoo raggaasifamee hawaasatti akka makaman ni beeksisa jechuun, Faanaan gabaaseera.
Haa ta'u malee haati warraa Obbo Baqqalaa Aaddee Haannaa Raggaasaa oduu kana akkuma nama biraa midiyaarraa dhagahuun alatti abbaa warraa isaanii irraa dhagahuu akka hin dandeenye BBC'tti himaniiru.
''Waa'een hiikamu isaanii yeroo baayyee waan odeeffamuuf, gadhiifamee hangan ijaan argutti amanuun na rakkisa.'' jedhaniiru.